XOG-CUSUB: Nagelsmann Oo Noqonaya Tababaraha Xiga Ee Barcelona – Garsoore Sports
XOG-CUSUB: Nagelsmann Oo…
XOG-CUSUB: Nagelsmann Oo Noqonaya Tababaraha Xiga Ee Barcelona
Madaxweynaha cusub ee kooxda Barcelona Joan Laporta ayaa isha ku haya macalinka kooxda RB Leipzig ee Julian Nagelsmann si uu uga dhigo tababaraha xiga ee kooxda, sida ay warineyso El Larguero.
Laporta ayaa loo doortay xilka tababarenimo ee kooxda Barca todobaadkii tegay isagoo beddel u noqday madaxweynihii hore kooxda Josep Maria Bartomeu kaasoo loo xiray durbabana loo sii daayay eedeymo la xiriira musuqmaasuq uu ku kacay intii uu talada hayay.
Markii uu ku guulleystay xilka madaxtinimo, Laporta ayaa durbaba ay ahmiyadiisu u jeesatay sidii uu xal ugu heli lahaa qaab-cayaareedka kooxda Barcelona ee tababare Ronald Koeman oo meel liidata maraysa.
Tababare Ronald Koeman oo uu dhashay dalka Holland ayaa haatan haya jagada tababarenimo ee kooxda waxaana xushmad uu ka helayaa madaxweynaha cusub ee kooxda hayeeshee Laporta ayaa ka doorbidaya tababare Nagelsmann.
WAR CUSUB: Timo Werner Oo Ka Tagaya Chelsea!
Mid Kamid Ah Saamiyada Kooxda Manchester United Oo Beec Ah